Imiphumela Yokwenqaba Ukungabaza Ngendlela Yakho Ne-Descartes - Rabi Michael Avraham
Imiphumela yokwenqaba ukungabaza kwendlela yakho nama-Descartes
Izimpendulo > Isigaba: Okujwayelekile > Imiphumela yokwenqaba ukungabaza kwendlela yakho nama-Descartes
Okunengqondo Ubuzwe eminyakeni engu-2 edlule
Bengifuna ukubuza ngento engihlangane nayo kuwebhusayithi yabaPhenduki,
Kukhona umbuzo owaziwa kakhulu ka-Kant ukuthi akukho ukuxhumana phakathi kwe-subjective kanye nezwe ngalinye futhi kubonakala kulula, khona-ke umbuzo uvela ngokuthi singathembela kanjani ekucabangeni kwethu ukuthi kukhona ukuxhumana phakathi kwezwe nomuntu. Phela akwenzeki ukunikeza ubufakazi obunjalo ngoba besihlale sibhekana nokuhlehla kwemibuzo, kodwa kubukeka sengathi labo abangakungabazi bayakwamukela ukuthi ukucabanga okuyisisekelo akufanele kulethe ubufakazi futhi ikakhulukazi ukuthi lena incazelo yabo njengencazelo. i-axiom.
Ngakho bengifuna ukubuza, ingabe umcabango ophambene wokuthi noma yini engenasizathu iyangabazeka, yona ngokwayo iwukucabangela?
Uma kunjalo, khona-ke kubonakala sengathi sinohlobo lwesibopho sokuthatha isiqiniseko mayelana nokuqagela kwethu okuyisisekelo, kodwa njengoba kwaziwa urabi akakwamukeli lokhu, kodwa esikhundleni sokuqiniseka ngokunengqondo, kodwa kufana kanjani nendaba? Amathuba okuba khona athatha ukuthi uyasamukela isimangalo esingabazayo sokuthi cha?
Futhi, ngisanda kufika nombuzo mayelana noDescartes okwathi ngokusho kwakhe akazange akuthole konke, kodwa ngenxa yobufakazi be-ontological kanye nokuthi uNkulunkulu muhle ekuzameni ukuxazulula lolu daba, kodwa wathatha kanjani lokho okuhle? inhloso?
Angiqiniseki ukuthi ngiwuqondile umbuzo. Noma kunjalo, ngizophawula kancane kulokhu okushilo:
Kant akasho ukuthi akukho ukuxhumana phakathi kombono wethu nomhlaba. Kukhona ngempela ukuxhumana, nokunye okwengeziwe. Uthi nje isithombe esisibonayo siyinto eyaziyo. Kodwa umelela isenzakalo emhlabeni ngokwawo. Isibonelo, i-electromagnetic wave emhlabeni ihumusha ukukhanya ekwazini kwethu. Ingabe akukho ukuxhumana phakathi kwabo? Ngokusobala kukhona ukuxhumana. Ukukhanya ukumelela okubonakalayo kwamagagasi kagesi.
Kunombuzo osuphakanyiswe maqondana noKant, usuka lapho azi khona nokuthi kunomhlaba ngokwawo uma konke okufinyeleleka kithina kuyiphenomena kuphela (i-cognitive phenomena). Ngicabanga ukuthi lokhu kuwumphumela wesimiso se-causality, okuyisimiso sokuqala. Kusukela kulesi simiso kulandela ukuthi uma kukhona okwenzekayo okwaziyo kufanele kube nokuthile emhlabeni okubangela lokho.
Angizange ngiwuqonde umbuzo mayelana nento engenasizathu. Ingabe uhlose ukubuza uma kukhona izinto ngaphandle kwesizathu? Eqinisweni kungenzeka yebo, kodwa isimiso se-causality asicabangi. Kuthiyori ye-quantum, isibonelo, ubudlelwano phakathi kwembangela nomphumela buhlukile futhi abukho ngisho nangomqondo ojwayelekile.
Uhlanganisa isiqiniseko neqiniso. Ukuthi ngicabanga ukuthi akukho okuqinisekile akuhlangene nengxoxo nganoma iyiphi indlela.
Ukungabaza kuphambene nokucabangela. Umuntu ongabazayo ucabanga ukuthi ukuqiniseka kuphela okunikeza iqiniso, njengoba livela kulokho okushoyo. Kodwa unephutha ngalokho.
Okunengqondo Uphendule eminyakeni engu-2 edlule
Ngiyabonga kakhulu ngamacomments abanye babo ngiqonde ngizozama ukucacisa izingxenye engingaziqondi.
2. Nami ngike ngabuza ngaleli phuzu. Noma ubani ongangabazi ubonakala evuma ukuthi kufanele kube khona ukuxhumana phakathi kwezwe kanye nesenzakalo (isho amehlo nokukhanya ku-Doge 1), kodwa uma konke ukwazi kwethu kwakhiwe kuphela kumgomo we-priori njenge-causality kusengenzeka. ihunyushwe ngezizathu ezingenakubalwa ukuthi imibono evela ezinzwa idalwe kanjani, ngisho ne-Descartes Isizathu ngaphansi kwalo mqondo obanzi; Kodwa iningi lethu alicabangi ukuthi kuyisizathu esifanele. Uma kunjalo, isimiso se-causality sisodwa asibonakali sanele, kodwa sidinga okuthile okwengeziwe, nakuba kubonakala sengathi singemuva.
3. Angizange ngiqonde umbuzo mayelana nezenzakalo noma osebenzayo, nakuba kunjalo kukhona ukuxhumana, kodwa ikakhulukazi mayelana nokuqagela kanye nezimangalo, isibonelo incazelo yokucabangela ukuthi ayinaso isizathu. Ngicabanga ukuthi yilokhu kuphela okungakholeka okuthile, ngohlobo lombono wokuthi uNkulunkulu uyihange lezimbangela emhlabeni. Kodwa uma singakungabazi ukuqagela singasho kanjani ukuthi okuthile akuqinisekile kodwa futhi kunomkhawulo wokucabangela? Phela, noma imuphi umcabango ophathelene nokucabangela uthatha ngemuva ukuthi ungabuzwa.
3. Futhi ngakolunye uhlangothi, umuntu ongabazayo endleleni yakhe uzimisele ngempela ukungabaza ukucabangela, kodwa uma kunjalo, angangabaza futhi ukucabanga ukuthi imibono kufanele ibuzwe noma ukuthi noma yini ngaphandle kwesizathu ayilungile. Uma kunjalo, ingabe ubonakala egawula igatsha lakhe? Cha?
5/4 Bengisho 3 Risha.
3. Usebenzisa igama elithi “isizathu” ngendlela engingayiqondi. Ingabe usho ukunambitha / ukucabanga?
Asikho ngempela isisekelo sesisekelo. Kodwa akulona iqiniso ukuthi angikungabazi ukuqagela. Asikho isimangalo, ukucabangela noma isiphetho, esiqinisekile kimi.
I-Rationalist Uphendule eminyakeni engu-2 edlule
Ngempela ngiqonde ohlangothini lwesizathu / ukunambitheka.
Okokuqala, mayelana no-2 uyavuma ukuthi simane sinesisekelo sokuthi esikubonayo kuyiqiniso? Ngoba akubonakali kwenele kunoma yimuphi umgomo obalulekile ukuthi angakwazi * eyedwa * ibhuloho elibheke ekwamukelweni komhlaba.
Ngakho-ke uma kunjalo, ukwazi kanjani ukuthola isisekelo kodwa ngendlela engaqinisekile? Yilokhu okungacacile kimina.
Futhi ngisho noma uthi kungenzeka, maqondana nalokho okuzobe kungaqinisekile? Ngokuphathelene nesinye isicelo noma okunye ukungabaza? Kungenzeka ukuthi ukungabaza okufanayo kuzophinde kucabange ukuthi kukhona enye, incazelo eyisisekelo, nokuthi yena, noma okokuqala, uhlelo oluyisisekelo lwezincazelo luyi-axiomatic. Kodwa-ke kumane kusho ukuthi umcabango ebesicabanga ukuthi uyisisekelo awunjalo, kodwa isiphetho esivela kokuthile okuyisisekelo.
Ngaphandle uma ungabaza futhi uthi ukucabangela kungabuzwa, kodwa-ke amathuba angena kuphi esithombeni? Ngoba yonke into kuye ilingana ngokulinganayo. (Futhi umcabango wokuthi yonke into ayinangqondo ayinangqondo…)
Futhi uma kunjalo, kuze kufike lapho uthola izimangalo ezingabazayo khona-ke abukho ubuqiniso beqiniso lokuthi okuthile kubonakala kunengqondo kimi, ngoba wonke amathuba asezingeni kuphela lokucabanga okunengqondo kodwa akukho ukuxhumana phakathi kwawo nomhlaba onenjongo futhi akusoze kwahlanganiswa njengesandulela.
Futhi uma ungangabazi, awubuzi ukuqagela noma kunjalo...
Umlamuli wokugcina Uphendule eminyakeni engu-2 edlule
"I-electromagnetic wave emhlabeni ihumusha ukukhanya"
Igagasi lihumusha libe amasignali neuronal. Ihumushela kwenye into Ihumushela kwenye into… Ngandlela thize ekugcineni kuba nokukhanya.
Akukho ukuxhumana okuqondile phakathi kokukhanya namagagasi. Umongo awuqondile kakhulu.
Ngilahlekelwe nguwe ngokuphelele. Uxuba ucansi nokungahlanganyeli ngokuphindaphindiwe, ungabhekiseli kulokho engikuphendule. Sengikuphendule konke.
Umlamuli, ukuxhumana okuqondile. Enye ibangela enye, ngisho noma yenziwa ngokulamula kwezinyathelo ezimbalwa. Uma uqaqa indlela phakathi kokuhlikihla umentshisi nokuthungela umlilo uzothola izigaba ezithile ezimaphakathi. Manje? Enye ibangela enye. Ingabe i-Nafam uma kunezigaba ezimaphakathi? Nokuthi sibhekene nendaba yamandla akhe?
Iphendula ekulahlekelweni Uphendule eminyakeni engu-2 edlule
Uma ungilahlile pho uphendule kanjani?...
Okungangicaceli kahle wukuthi kuvunyelwana ngokuthi incazelo yesisekelo ukuthi asikho isizathu sokuyisekela.
Kodwa uma kunjalo, isisekelo singabuzwa kanjani ngaphandle kokusetshenziswa kwesisekelo esithile? Njengoba uthe wenza.
Ngakho ngakolunye uhlangothi uthola lokho okucatshangelwayo kungabuzwa ngakho-ke ungacabanga kanjani ukuthi okuthile mancane kakhulu noma mancane? Ngemuva kwakho konke, ungaphinda ungabaze lowo muzwa wamathuba…? Ngakho-ke isiphetho sakho besinengqondo ukuthi ube sulfist. Noma uzongabaza umcabango ongawungabaza futhi uzonamathela.
Kodwa kufanele kushiwo ukuthi kukhona ekuqaleni kokucabanga ukuthi ukuqagela okuthile * okuqinisekile kuzoba kuncane njengoba kuyikho.
Ngokwesibonelo umcabango wokuthi esicabanga ukuthi kunengqondo kuwumgomo ngempela (ngisho noma kungenjalo akuyona inhloso). Ngoba kusukela lapho kuphela kungashiwo ukuthi kungenzeka abasebenzi, njll. Kodwa uma uthi konke okucatshangelwayo akukaze kube nephesenti elithile nokungabaza okungokwemvelo kukho, lokho kungabaza kufanele kwakhiwe ngokulandela izimangalo ezingabazayo ezingaphandle kwazo, futhi njengoba ungumuntu othanda ukungabaza awusoze washo ukuthi kukhona njengoba kunengqondo...
Ngakho-ke ngifuna ukusho ukuthi nawe uyavuma ukuthi kukhona into yokuqala mayelana nendlela yakho futhi akuyona yonke into ezwakalayo. Noma amathuba aqinisekile.
Noma kunjalo, uma ngiqinisile, khona-ke okuhle ukukubona ukuthi ungathanda ukuba yi-postmodernist kunokuba umuntu oyisisekelo 😉
Futhi nakuba abukho ubufakazi bokukhuluma ngabo, Uphendule eminyakeni engu-2 edlule
Futhi nakuba bungekho ubufakazi bokukhuluma ngabo, kunomkhondo wokukhuluma esanduleleni ezincwadini zokholo:
"Ngokwazi kwami ​​konke, umuntu akanalo ithuba lokufinyelela isiqiniseko kunoma yimuphi umkhakha." Uma ethole indlela yokufinyelela isiqiniseko esinjalo cishe wayenephutha (impela! 🙂) ”
Lokhu kusho ukuthi kukhona okuthile okuqinisekile nokuyisisekelo phansi kokucabanga kwethu ekupheleni kosuku ethi kukhona ukuhlobana phakathi kokucabangela kanye nomunye umhlaba kufanele uphelele ekungabazeni.
Phendula, ngilahlekelwe nguwe manje (ufunani manje) njengoba ngike ngaphendula yonke into ngaphambilini.
izihlalo? Uphendule eminyakeni engu-2 edlule
Ingabe indlela yakho nayo kufanele ibe nesisekelo esithile (ngisho esilinganiselwe), esizokwamukela ngokuqiniseka hhayi nje ngokucabangela.
Futhi ngicabanga ukuthi lesi sisekelo siwukuthi lokho okubonakala kunengqondo kithi kunengqondo futhi kukhona ukuhlobana nalokho. Kungale ndlela kuphela engicabanga ukuthi kungenzeka ukuthi ngiphendule imibuzo yami ngaphandle kokuwela ekungabazeni okuphelele futhi ngakolunye uhlangothi ngingasho ukuthi konke kuqinisekile.
Ngakolunye uhlangothi, uqale washo ukuthi ngempela “uyakungabaza okucatshangelwayo okuyisisekelo. Asikho isimangalo, ukucabangela noma isiphetho esiqinisekile kimi. "
Kodwa uma ubuqonde ngempela okubhalile, kufanele ube nekhono lokubona ukuthi isiphi isisekelo esilungile noma cha (ngoba awuyena umuntu ongabazayo….), Kodwa leli khono liwuhlobo lwesisekelo futhi uzolingabaza bese uliphinda. futhi-ke kufanele ube nokungabaza.
Ngicabanga ukuthi lezi zinto zilula, kodwa njengoba ngibona ukuthi usuyisazi sefilosofi sesibili sokufuna izinto ezifanayo lapho nobabili nizimemezela ukuthi ningabalandeli besimo samanje bengifuna ukubona ukuthi ngiqinisile yini noma amazwi ami abengekho bukhali. Futhi ungalidla ikhekhe futhi ulishiye liphelele.
Ngoba futhi uyakwamukela ukuthi akukho ukuxhumana phakathi kokuqagela kanye nokuzimisela kwakho emhlabeni ngokusho kukaKant futhi wonke umuntu kufanele abuze, nokho kwezinye izindaba kuneziphetho ezizwakalayo… Lesi akusona isimangalo sakho impela kodwa ekugcineni sifana ncamashi nomnyakazo. Ngethule lapha.
Ngiphendula okwesithathu: cha. Akukho okuqinisekile emehlweni ami. Futhi ngiyaphinda okweshumi nesikhombisa ukungaqiniseki akukhona ukungabaza. Ukungabaza kusho ukuthi isikhundla esithile asingcono kunesiphambene. Ukungaqiniseki, ngakolunye uhlangothi, kusho ukuthi anginasiqiniseko.
intombazane Uphendule eminyakeni engu-2 edlule
Futhi kuthiwani ngekholomu yejiyomethri ethambekele ku-0. Kukhona okwakubonakala kunengqondo kimi. Kunengqondo emehlweni ami ukuthi lokho okubonakala kunengqondo kimi - kunengqondo. Kunengqondo emehlweni ami ukuthi lokho okubonakala kunengqondo kimi kunengqondo. Sizonciphisa amathuba abe isiqiniseko esingu-99.99% futhi isimangalo ngasinye sizofinyelela umkhawulo wesiqiniseko esingu-0%.
Ngabhala engangikuqonda embuzweni. Ngoba uma impendulo ithi "into ebonakala inengqondo kimi" lapho siyibeka ku-99.99, khona-ke i-99.99 ngemva kwawo wonke ama-akhawunti emhlabeni, futhi lokhu kuyisimangalo esiqondile emhlabeni hhayi isimangalo kimi - ke thina nquma ubudlelwano obunzima phakathi kokucabangela kanye nesiqiniseko ngokuqiniseka.
Akuqondakali ngokuphelele Uphendule eminyakeni engu-2 edlule
Isimangaliso sidalwa kanjani ukuthi asikho isiqiniseko kodwa asiholeli ekungabazeni?
Ngoba wonke umqondo wokungaqiniseki nokuhlala unengqondo uthatha ukuthi kukhona inketho yesibili, kodwa awunalo ikhono lokuhlola ukuthi yini enengqondo ngoba ngokwakho kungomunye umcabango wokuthi uzophinde ubuze ukuthi kunengqondo yini ...
Lesi simangaliso esiyisimangaliso silele kumehluko phakathi kokungabaza okungu-90% kanye nokungabaza okungu-50% (uma sigcizelela ukulinganisa). Nakuba lokhu kumangalisa ngempela futhi kungaqondakali, kusengenzeka. Ngigingqa ikhiyubhu izikhathi eziyizigidi eziyisithupha. Ngibheja ukuthi umphumela uzosatshalaliswa ngokulinganayo futhi kuzoba nemiphumela engaba yisigidi ngewigi ngayinye. Nginokungabaza okuthile (akuwona u-100%) kodwa noma kunjalo lokhu cishe kuzokwenzeka. Amazing.
Futhi nginekhono lokuhlola ngokunembile inani le-intuition. Le circularity imane nje iyi-gibberish. Kufana nokubuza ukuthi wazi kanjani ukuthi uqinisile, uwena onqumayo ukuthi uqinisile. Lokhu kuhluke kanjani engxoxweni evamile yokungabaza?
Impela lezi zigigaba siziqedile kwaze kwachitheka igazi.
Ikuphi ukuxhumana phakathi kwalokhu kanye nengxabano evamile yokungabaza. Lapha umuntu akabuzi ukuthi "wazi kanjani" kodwa wemukela konke akushoyo futhi axoxe ngendlela yakhe kuphela. Uma ethi uqinisekile ukuthi into ethile ilungile, futhi uqiniseka ngamaphesenti ayikhulu ukuthi ezimeni lapho eqiniseka ngamaphesenti ayikhulu ukuthi into ilungile bese kuthi amaphesenti ayikhulu okuthi into ilungile - khona-ke konke kuhamba kahle ngoba oyedwa ophethe noma yini uyosala emunye. Kodwa uma inethuba nje, khona-ke umbuthano ophindaphindayo uyancipha ube uziro. Kulula kakhulu. Kunoma yikuphi, kubonakala sengathi kimina kungenzeka ukuthi akekho omunye lapha esizeni ngaphandle kwakho owazi ukuphendula lokhu. Futhi noma unempendulo ehlakaniphile awukwazi ukuyithola lapha ochungechungeni. Ngokusobala i-SAG yayinecala futhi yashintsha phakathi kwempendulo nempendulo.
Ngethemba ukuthi ngibonile ukuthi ngaqonda ngaphambili Uphendule eminyakeni engu-2 edlule
ngempela. Ngiyavuma ukuthi kulula kangangokuthi ekugcineni ikhono lokuhlola intuition ngokwalo liyisisekelo okufanele wamukele * ngokuqiniseka *, ngisho noma ngaphakathi kwe-intuition kufakwe ukuthi kungenzeka ukuthi akuqinisekile, kodwa akuveli ku-intuition. umhlinzeki wangaphandle, kodwa * kwangaphakathi * ukungabaza Ingxenye yencazelo yalesi sisekelo, into esemqoka ukuthi kukhona isici esithile lapha esiqinisekile.
Leli phuzu libalulekile ngoba ngangifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi lezi zinto ezazibonakala zilula ngokuphelele kimi zaziyiqiniso ngempela. Ngoba njengoba ngishilo ekuqaleni kukhona umuntu obalulekile ophinde abe yisazi sefilosofi eliphika ngokuphelele leli phuzu kodwa ugomela ngakolunye uhlangothi ukuthi akakungabazi lokho okuzwakala kungenakwenzeka ngokuphelele.
Futhi ngakho-ke kuyo yonke ingxoxo lapha kubonakala sengathi nawe uya endleleni yakhe, ngakho-ke angikwazanga ukubona ukuthi lesi simangaliso singakhiqizwa kanjani futhi ikakhulukazi ekuqondeni kwami ​​​​okudlule kuwe ukuthi lokhu kungukungabaza kwangaphandle kwesisekelo bese kuphakama umbuzo. ukuthi kungani kungukungabaza okungu-10% kuphela hhayi ukungabaza kwe-methodological okungama-50%. Kodwa ngiyabona uyavumelana nendlela yami engiyethule lapha.
Ngempela, kungenzeka ukuthi uShabbat uhlongoze incazelo echaza isazi sefilosofi efanayo esebenzisa ukuhlanganiswa kokungapheli kwezincazelo ukuthi nakuba yonke incazelo idinga incazelo isenesisindo esincane, kimina ngokwami ​​izwakala idida ngokuphelele uma kungenzeka. Kodwa iyona ndlela kuphela engayithola ngayo.
Lo mbuzo ubalulekile futhi ekuphikiseni kwakho izimangalo eziyisisekelo ngakolunye uhlangothi kanye nokwenzeka kokungaqiniseki ngakolunye. Kodwa ungase uthi uhlobo oluthile lwe-tatology. Nakuba ngicabanga ukuthi iyawenza ubukhali umehluko phakathi komphakeli wangaphandle (PM) kanye nomphakeli wangaphakathi (indlela yakho yokwenziwa).
Cha, akuqiniseki. Nalokhu akuqinisekile.
ecasulayo Uphendule eminyakeni engu-2 edlule
Uyawamukela umehluko phakathi kwesimangalo sakho sokuthi ukuqagela okuyisisekelo ngokwako kulele ekucabangeni okungaqinisekile, kanye nokungabaza okungaphandle kokuqagela okuyisisekelo ngokwako? (Khona-ke uthola olunye uhlelo lokulawula njengesisekelo, noma ulahlwe yicala njengomuntu ongabazayo).
Ngaphandle kwalokho angiqondi ngempela ukuthi awungabazi kanjani uma ungabaza ukuqagela ngisho nangamaphesenti ngamanye (inqobo nje uma kungeyona ingxenye yokucabanga okufanayo okungaqinisekile).
Kimina kubonakala sengathi kunomehluko lapha okungenzeka ukuthi angiwuqondi ngoba uma kungenjengoba ngishilo angiqondi neze ukuthi usho kanjani ukuthi awungabazi. Mhlawumbe ungachaza leli phuzu elincane.
Angikwazi ngempela ukuqonda ukuthi inkinga ikuphi lapha. Ngikhuluma izinto ezilula nezicacile. Ukucabanga kwami ​​​​akuqinisekile emehlweni ami. Hhayi ngoba beyinhlekisa kodwa ngoba anginaso isiqiniseko sokuthi baqinisile yini (kukhona okunye okungenziwa). Angazi ukuthi kuyini ukungabaza kwangaphandle. Nginokungabaza okuthile ekucabangeni kwami. yilokho kuphela.
manje ngiyakuzwa? Uphendule eminyakeni engu-2 edlule
Ukungabaza kwangaphandle Inhloso ukuthi ukungabaza kuvela endaweni engeyinhle njengohlobo lokudideka kwangaphandle kokucabanga kodwa okungeyona imvelo njengengxenye yesisekelo sokucabanga okuyinto ngokwesibonelo ethi inembile kuma-90% kuphela wamacala.
Kodwa ngokushesha nje lapho ubhala: "Imibono yami ayiqinisekile emehlweni ami". Ngoba anginaso isiqiniseko sokuthi zilungile yini (kukhona ezinye izindlela ezingenzeka). Ngakho-ke kuzwakala njengomhlinzeki ongalungile nhlobo futhi uma kunjalo ungaqhubeka nokuphonsa futhi:
Ngoba kusho ukuthi kukhona "wena oqaphelayo" futhi njengangaphandle kubo ubheka okucatshangwayo. Isibonelo ungakuqonda lokhu emzekelisweni wakho mayelana namehlo engqondo ukuthi abheka imibono ekude.
Kodwa uma kunjalo, kufanele uvume ukuthi uwena ohlukanisa (= amehlo?) Bona ngokwabo ngokuqiniseka okuphelele mayelana nekhono labo lokubona imibono eyisisekelo ukuze kuthi noma ungalitholi izinga lokunemba eliphelele ngokuphelele kusafanele zamukela ngokuqiniseka ukuthi zinezinga elithile lokunemba Futhi ezinye izinhlaka ezifana nebanga lombono, izinkanuko nokunye. Ngakho-ke maqondana nezinga elifanayo awungabazi nakancane ukuthi nokunganembile kubo kungokwemvelo kulesi sisekelo.
Kodwa uma uphinda ubangabaza futhi:
1. Khona-ke awusoze wakwazi ukuphuma emjikelezweni wokungabaza. 2. Asikho isizathu sokucabanga ukuthi inani lezibalo okufanele lihlinzekwe liyi-10% kuphela uma sicabanga hhayi ama-50%. Futhi lokhu sekuvele kuwukungabaza okuphelele 3. Kuzoholela ekungeneni kokungabaza ukuthi ekugcineni uzokwamukela ukuthi ukunemba kwamaqiniso akho aphathekayo kuvame ukuba zero ku-zero ebuningini bamathuba. 4. Ungaphinda ungabaze umgomo wokuphonsa ukungabaza okungekuhle.
J Vuliwe Ingabe iLehavah iyinhlangano ecwasa ngokwebala? (Ikholomu 484)
Namuhla lo mbono usezindaweni zomphakathi Vuliwe Ngokushona kukaProf David Halvani Weiss ongasekho (ikholomu 485)